Hogganoonni Amerikaa Kaanaadaa Fi Meeksikoo Marii Gaggeessan
Hoggantoota biyya sadeenii marii geggeessan, Sadaasa 18, 2021
Rakkoolee guutuummaa Amerikaa kaabaa fi sana darbees jiraniif furmaata barbaachuu irratti marii fulleeffate Kamiisa kaleessaaWaayiit Haawuus kaleessa hogganoota Kaanaadaa fi Meeksiskoo waliin gaggeessee jira.
Hogganoonni kunis kaayyoo walii keenyaa kan ittiin jedhan, weeraara dhukkuubba KOOVIID-19 xumuura itti gochuu, fayyaa uummata addunyaa jajjabeessuu, dorgommii guddiina dinagdee argamsisuu mijeessuu, fi godaantootaaf kutaa kanaaf deebii barbaachiisu qindeessuuf walii galuu isaanii Waayiit Haawuus Kamiisa kaleessaa galgala eega mariin xumuramee booda beeksisee jira.
Prezidaant Joo Baaydiin aangawoota lameen waliin waldukaa ituu hin dubbatiin dura qophaatti mummicha ministeeraa Kaanaadaa fi prezidaantii Meeksikoo waliin qophq qophaatti dubbatanii turan.
Angawoonni sadeen iddoo tokkotti marii ennaa gaggeessan waggaa 5 keessatti kun ka duraati.
Itti aantuu prezidaantiin Yunaaytid Isteetes Kamaalaa Haariis qopha qophaatti angwoota sadarkaa olaanaa Kaanaadaa fi Meeksikoo kana waliin dubbatanii jiru.
Prezidaantii Meeksikoo waliin waa’ee nageenyaa, dinagdee , weera KOOVIID-19 fi walta’iinsa waa’ee hawaa irratti dubbatan jedha Waayit Haawuus.Kana malees Amerikaa waaltaa keessatti hundee godaansaa maal akka ta’e, fi akkaataa godaantootaaf deebiin akka kutaatti kennamuu qabu irratti dubbatan.
Haariis mummicha ministeeraa Kaanaadaa waliin waa’ee baqattoota Afgaanistaan qubsisuu fi jeeqamsa Heeytii fi Itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen dubbatan.
Burkifaanaasoo Keessatti Lakkofsii Namoota Ajjeefamanii Dabalee Jira